“Zidane wuxuu ku adkeysanayaa inuu sameeyo saxiixa Paul Pogba” – Gool FM
“Zidane wuxuu ku adkeysanayaa inuu sameeyo saxiixa Paul Pogba”
(Madrid) 07 Luulyo 2019. Ciyaaryahankii hore xulka qaranka Spain iyo kooxda Real Madrid Fernando Morientes ayaa xaqiijiyay in macalinka reer France ee Zinedine Zidane iuu isha ku hayo inuu lasoo saxiixdo xiddiga Manchester United Paul Pogba inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Fernando Morientes ayaa sheegay in Zidane uu xiiseenayo saxiixa 26 jirka kooxda Manchester United si ay u wada shaqeeyaan xili ciyaareedka cusub.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Fernando Morientes waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Zinedine Zidane wuxuu ku adkeysanayaa inuu sameeyo saxiixa Paul Pogba”.
“Marka uu tababaraha doonayo inuu heysto ciyaaryahan gaar ah, sababtoo ah wuxuu ogyahay inuu ka faa’iideysan doono qorshihiisa islamarkaana uu ciyaari doono doorkiisa ugu fiican”.
“Pogba Waa ciyaaryahan aad u wanaagsan, laakiin imaanshiyihiisa ayaa la micno ah in kooxda ay ka tagayaan ciyaartoy fiican ee booskiisa ah, Real Madrid waxay heysataa khad dhexe ee aad u fiican” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Fernando Morientes.
Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America oo jawaab cad ka bixiyay hadallada Lionel Messi
“Wax badan ayaan ku guuleysan doonaa” - Klopp oo farxad galiyay taageerayaasha Liverpool